किन बढ्दैछ आत्महत्या ? » RealPati.com
काठमाडौं । आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस । नेपालमा पनि सचेतनाका लागि विभिन्न सन्देश दिँदै यो दिवस मनाइँदै छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय आत्महत्याको दर बढ्दो रहेको छ । नेपालमा अप्राकृतिक मृत्युका कारणहरूमध्ये आत्महत्याको तथ्यांक चिन्ताजनक रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या २० देखि ३० प्रतिशत बढेको छ ।
विभिन्न कारणले गर्दा यो दर बढेको उल्लेख गरिएको छ । विशेष गरी लकडाउन भएसँगै परिवारमा बढ्दो कलह, दुई छाक खानलाई समेत समस्या भएपछि बढेको चिन्ता तथा प्रेमीप्रेमीकाबीचको बढ्दो दूरीका कारणले समेत यो दर बढेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी अवैध सम्बन्ध पछिको परिणामका कारणले आत्महत्या गर्न वाध्य पारेका घटनासमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । बढ्दो बेरोजगारले समेत पनि आत्महत्याको दर बढ्दो रहेको पाइएको छ ।
गएको चैत ११ गते लकडाउन लागेको थियो । उक्त समयदेखि साउनसम्म २२ सय भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको तथ्यांक फेला परेको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मानसिक रोग विभागका प्रमुख प्रा. डा. सरोजप्रसाद ओझाकाअनुसार कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्या र मानसिक तनाव झेल्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको छ ।
यो समयमा राज्यका तर्फबाट पनि आमनागरिकलाई सहायता दिनुपर्ने खाँचो रहेको उनले बताए । त्यसका लागि सरकारले बेलैमा सचेतना अभियान नल्याए यो स्थिति अझ डरलाग्दो हुने उनको चेतावनी छ ।
कोरोनाको संक्रमणमा विस्तार भएसँगै स्वस्थ मानिसलाई आफूलाई पनि संक्रमण हुने हो कि भनेर डर लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, यो स्थिति सधैँ रहँदैन । रातपछि दिन आउँछ कोरोना भाइरसको प्रकोपले सिर्जना गरेको त्रासको वेला मानसिक रूपमा सबल बन्न सक्यौँ भने भाइरसको संक्रमण भए पनि हाम्रो शरीरले त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्छ भनेझैँ यो कठिन स्थिति पनि लामो समय रहँदैन ।
अहिलेको भन्दा ठूला महामारी विश्वले विगतमा भोगेको छ र त्यसबाट पार पनि पाएको छ । कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।
डा.सरोज ओझा भन्छन्, ‘जसरी परीक्षा दिन जाँदा हामी एकछिन डराउँछौँ, त्यस्तै हो– अहिलेको अवस्था पनि । त्यसकारण आत्तिने र नकारात्मक कुरा सोच्ने होइन, सकारात्मक कुरा सोच्ने र सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनेमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष आत्महत्याका कारण ८ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरेको छ ।
यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न समस्याले विगतको तुलनामा मनोसामाजिक समस्या र आत्महत्याको दर बढेको छ । लकडाउन, निषेधाज्ञा तथा घरभित्रै बस्नुपरेका कारण गरिखाने वर्गमा बढी असर देखिएको छ ।
समस्यालाई बाँड्न सके तनाव कम हुने विज्ञले बताएका छन् । साथै मनमा कुरा नखेलाउन, सकारात्मक कुराहरु सोच्न र नियमित व्यायाम गर्न विज्ञहरुको सुझाव छ ।
आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले पहिले नै परिवार, आफन्त वा साथीभाइलाई पूर्वसंकेत दिने गरेको समेत पाइएको छ ।
तर व्यस्त जनजीवनका कारण र सबैजसो मानिस तनावमै रहने भएका कारणले पनि एकले अर्कालाई हेर्न फुर्सद नहुँदा आत्महत्या बढिरहेको बताइन्छ ।